RWBY's Toxic Fandom, Uye Kukakavara Kwekuzviuraya - Zvimwe
RWBY's Toxic Fandom, Uye Kupokana kwekuzviuraya (Ngatijekesei Zvimwe Zvinhu Kumusoro)
Mecha Kambani yakavakirwa muUK, saka nguva dzekuma9: 50 AM pandinenge ndichinyora izvi.
Kana vanhu vachiti RWBY'S anime fandom ine chepfu havasi kunyepa. IYO Chaizvoizvo ine chepfu fanbase.
Zvinoita kunge husiku hwapfuura ROT yemutambo yakapararira mushure mekuburitsa nhau nezve iko kunofungidzirwa kuzviuraya kwemusikana ane hukama neRWBY's fanbase.
Iyi nhau yakatorwa kubva Gamba Hei's YouTube chiteshi, kwaakataura nezvechinhu chimwe chete ichocho.
inoratidza kunge mudiwa mufranxx
Kune nhau nhasi dzemukadzi wechidiki, Cleo, uyo anonzi akatora hupenyu hwake pamusoro pekushungurudzwa kubva ku #RWBY munharaunda. Heino bhurogu inokurukura zvakaitika kana iwe uchida kuzviverengera uye kugadzira ako maonero. https://t.co/oKvNbQ5EbC
Ndatenda @SparrowsAlbion zvekugovana izvi
- HeroHei (@_Hero_Hei_) Mbudzi 6, 2019
Zvizhinji zvemashoko akaunganidzwa mune zuro posvo zvakatorwawo kubva kunofungidzirwa vasikana account 'Tumblr' account, yake Twitter, uye boka remamwe ma tweets vachitaura nezve chinhu chimwe chete ichocho.
tw: kuzviuraya, zera musiyano hukama.
hesi @RoosterTeeth , wako rwby fandom akaisa pakuzviuraya chaiko kwemusikana iye zvino nekuda kwechikepe 'chisina kukodzera', tokumbirawo kuti titore zvimwe kubva kune imi vakomana? mamiriro eiyi fndm yasvika kure zvakanyanya. https://t.co/iL3ggXD981
- adam stannie (@owletarc) Mbudzi 6, 2019
Sezvauri kuona kubva pamufananidzo uri pamusoro we musikana akatanga kukakavara uku, iye AKADZIDZA account yake.
Kuzviuraya kweRWBY Kwaive Kwese HOAX YOKUTARISIRA
Vakagadzira chinyorwa chizere nezvazvo, icho chinoda kuvandudzwa kana kushatiswa izvozvi https://t.co/c7qeU5nHHz
- ZEpicTeam (@ MemeZilla07) Mbudzi 7, 2019
Mumwe munhu anoda kubata vanhu ava uye nekuvaita vazive kuti inhema https://t.co/9sxB6BX9i6
- TheLastSuperSaiyan & # x1f41d; & # x1f41d; & # x1f5a4; & # x1f49b; BLACK EAGLES (@ Thelastsupersa2) Mbudzi 7, 2019
TONS dzetweets dzakauya mafashama mukati mechinhu chose kuve kunyepedzera. Kana nemamwe mazwi - sei fanbase yaRWBY ine chepfu.
Saka zvine chepfu zvekuti ivo vanga vachida kuenda IZVI kure kungo sh * t kune vamwe vanhu munharaunda.
Kunyangwe maemail nezveRWBY kuzviuraya hoax akatanga kuuya kuburikidza
“Mhoroi ndinongoda kutaura kuti izvi zvasimbiswa kunyepa. Pane zvakawanda zvakatumirwa zveumbowo uye Cleo haatombovapo.
Semunhu akarasika shamwari dzepedyo kuzviuraya uye akapona pachangu izvi zvakanditsamwisa kuti ndione kuti ndeyenhema. Hongu kudheerera inyaya uye honzeri hombe yezvinhu zvakaita seizvi asi munhu uyu akagadzira ans Photo akadhonza chinyorwa chekutanga chandakaona.
Munhu mumwe chete iyeye ari kutumira pachinzvimbo chemunhu uyu ane maakaundi mana akasiyana kana anopfuura. Iko kune 2 yakatsanangurwa mitsara nezve izvi zvinoratidza humbowo. Ini ndanga ndichida kuisa izvi kunze uko kuti uku kunyepa. '
Chikonzero ini ndakavhara iyi nhau pakutanga
zvakanyatsorondedzerwa kuti sei RWBY'S anime fandom iri chepfu kupfuura kutenda.
Vanhu vazhinji vabuda pa Twitter vachitaura nezvazvo. Kunyangwe vanhu vari mumaindasitiri pachawo.
Nezuro musi waNovember 6, 3 nhau zvidimbu zvakaburitswa:
22 Yakakurumbira Anime theme Nziyo MuKutonhora 2019 (Yakarongwa neJapan)
Kyoto Mhuka Inogovana Mwoyo Kuputsa Meseji Kukudza Vakatambura (Chirangaridzo Chiitiko)
Musikana Anozviuraya Pashure Pokudheererwa NaRWBY Fanbase (Nhau Dzinosuwisa)
Yakanga iri 'yakajairika' zuva. Uye ini ndakafunga mutsika kuti yaive iyo rudyi chinhu chekuita kugovana nhau nezve izvo zvinonzi 'kuzviuraya'.
Asi zviri pachena kuti kwaive kukanganisa kukuru
Musikana akatanga zvese izvi akaderera pane sh * t. Kunyanya pandinoziva ini pachangu kuzviuraya kwakakomba sei uye kuti inobata sei munhu wese akabatanidzwa kune akabatwa.
Ini ndiri pachokwadi ndisingatauri pamashandisirwo akaita mapuratifomu seTwitter kupusa sh * t seizvi, zvese zveiyo ego sitiroko.
RWBY'S inotyisa fanbase ndeyechokwadi.
Kuputira izvi kumusoro nekutaura iyi RIDICULOUS tweet:
Yo @_Hero_Hei. Shiri diki yakandiudza kuti wakabhadharwa mari yeropa na https://t.co/4k1wkHugMz kugadzira hunyengeri maererano nekuzviuraya kwekunyepedzera kwemusikana wemanyepo anonzi Cleo kuitira kuti iwe ugone kuita kuti vatakuri vatarise zvakashata uye vawane akawanda maonero echiteshi chako. Kuchengeta kupindura Dramaalert knockoff?
- (.). Mbudzi 7, 2019
Chekutanga pane zvese rega nditi - Ini handitozive Hero Hei pachangu.
Uye haana hukama neMecha Kambani chero.
Ndiri kuziva zvaari uye nezvaanoita, asi pfungwa yekuti 'iwe wakabhadharwa mari yeropa kuti ugadzire kunyepa' ndeyechokwadi nzombe * t.
Chero ani anotevera Mecha Kambani kana ini pachangu anoziva izvi HAKUSI icho chinhu chechinhu chauchamboona.
Nhau dzese dzenhau dzinotorwa zvine muviri, uye hapana arikubhadharwa sh * t kushambadza nhau pane ino saiti.
Kunyangwe ini ndisingaone Hero Hei achigadzira iyo mhando yevhidhiyo kuti 'ita kuti vatakuri vatarise zvakashata' chero (ini ndinovimba kwete).
Izvo hazvisi kuzoitika pano uye hazvina kumboitika.
Nezvo zvataurwa - ichi chidzidzo chakadzidza
Kutenda kune wese munhu akatambanudza ruoko akataura nezvazvo.
yakanakisa anime yenguva dzese poll
IU UK yakanga yakarara panguva iyoyo, asi zvirinani yakatariswa izvozvi ndokuiswa pamubhedha.
Kyoto Mhuka Inozoshandisa $ 10.1 Mamirioni eDhora Mipiro Kubatsira Vanotambudzwa Nekupiswa kweArson
Anime senge mudiwa mufranxx